SOS Fanaiky : Seho ataon’ny mpanakanto 14
12/09/2018 admintriatra 0
Efa hatramin’ny fiandohan’ny volana septambra no miaina ao anatin’ny tsy fahasalamana noho ny fahasimban’ny voa roa i Fanaiky Rasolomahatratra. Efa nisy ny antso avo nataon’ny fianakaviana amin’izay enti-manana hiatrehina ny fitsaboana azy, izay mila fandidiana …Tohiny
Njakatiana : Hitety an’i Frantsa sy Etazonia
Toa ny fanaony isan-taona. Hiatrika indray ny fitetezam-paritra any Frantsa sy any Etazonia i Njakatiana. Fanaon’ity mpanakanto ity ny mivahiny sy manolotra seho ho an’ireo mpankafy azy any ivelany, na ireo teratany Malagasy, na ireo …Tohiny
Loka Nirhy-Lanto : Fifaninanana tantara foronina
Fantatra teo amin’ny sehatra politika, nefa nanana ny lazany ihany koa teo amin’ny tontolon’ny asa soratra i Nirhy Lanto Andriamahazo. Izay anjara toerany teo amin’ny sehatry ny kanto izay no tian’ny fianakaviany havoitra ka hanolorana …Tohiny
Antenimieran-doholona : Filoha vonjimaika i Mananjara Randriambololona
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny lapan’ny antenimieran-doholona, tetsy Anosy, ny lanonam-panendrena ny filohan’ny Antenimieran-doholona mpisolo toerana vonjimaika. Araka ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana mitondra ny laharana 3D-HCC/D3, ny 7 septambra teo, mahakasika ny …Tohiny